Manamboara KDE anao manokana amin'ny fanarahana ireto horonantsary ireto | Avy amin'ny Linux
Amboary ny KDE anao manokana amin'ny alàlan'ny fitarihana anao amin'ireo horonan-tsary ireo
Raha te hanana ny farany momba ny lozisialy ianao dia manana safidy roa:
Miandry olona hanao ny asa ho anao ianao ary manangona na manangona izay ilainao
Na tsara kokoa, ianao ihany no manao azy.
Ho an'ity dia hitantsika ireo horonan-tsary roa noforonin'ny mpamorona ny KDE:
Mora ny zava-drehetra, ka tsy misy fialan-tsiny 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Amboary ny KDE anao manokana amin'ny alàlan'ny fitarihana anao amin'ireo horonan-tsary ireo
Ummm .. Mampidina ny horonan-tsary ..
Hey Aaron Seigo mampiasa openSUSE!? Jereo ireo zavatra hitany! xD
Vao avy nanavao ny KDE ho an'ny kinova 4.10 avy amin'ny 4.9.98 aho ary tsy mitondra ny fiaviany mihetsika; Misy olona afaka manazava raha mitondra io safidy io amin'ny alàlan'ny default na raha tokony hampandehananao azy io. Mampiasa Kubuntu 12.10 x64 aho
Tsy mitondra azy ireo izany. Jereo ao amin'ny toerana fierenan'ny distro "dreamdesktop" na mivantana ao amin'ny KDE-Look.org/KDE-Apps.org
Lahatsary tsara be Elav 🙂 Toa anao, mampiasa kde sy debian fitsapana aho. Azonao atao ve ny manoro ahy ahy hanaraka ireo horonantsary ary hanavao ny KDE 4.10 na hijanona amin'ilay andrana? Tiako i debian, fa tsy tiako ny vanim-potoana hatsiaka xD
Amin'izao fotoana izao dia manomana ny zava-drehetra hametrahana Kubuntu ao amin'ny Netbook aho. Tsy afaka miandry an'i Debian aho manampy HKE 4.10 amin'ny Fitsapana xDDDD .. Na izany na tsy izany, azonao atao ny manandrana amin'ny masinina virtoaly na zavatra iray, ampidiro ity tahiry ity:
Ary avy eo:
Io no KDE vaovao indrindra azonao tratrarina ao amin'ny Debian.
Hanandrana aho ary holazaiko anao ny fandehany: D. Eny, io concidence xD io dia ampiasaiko amin'ny netbook ihany koa. Andao hojerentsika raha mandeha haingana kokoa izy dia mahatsiravina ny atoma n270.
Ady be loatra xD Toa tsy mandeha io
Uff .. Aza mikasika, aza mikasika hahaha .. Izay no mahatonga ahy mankany Kubuntu
Ny tsy tiako amin'ny kubuntu dia ny entany be. Lazao anay hoe nanao ahoana ilay fanandramana
Eny, tonga feno izany fa afaka manatsara kely foana ianao, ankoatr'izay, mampanantena fampisehoana tsaratsara kokoa ny KDE 4.10 .. izany no antony andehanako ..
Aww, mahazatra Debian! xD
Ao amin'ny Arch dia efa napetrak'izy ireo ny KDE version 4.10 ... Ankehitriny dia mizaha toetra azy aho ary amin'izao dia milamina ny zava-drehetra. Nanana olana vitsivitsy monja aho rehefa nanavao sy te-hamerina ary tsy namela ahy izany, fa aorian'ny famerenana amin'ny laoniny ny terminal dia mandeha tsara ny zava-drehetra. Hanohy ny fanandramana izahay hahitana hoe ahoana. ps: Dreamdesktop dia miasa tsara amin'ity kinova ity.
Nivoatra tamin'ny 4.98 ka hatramin'ny 4.10 aho, tsy manana ny fiaviany mihetsika. Azafady mba misy mahalala ny fomba anaovany azy, aiza ny misintona ary ahoana ny fonosana tsy hita. Misaotra betsaka.
Konqui, Katie ary ny sakaizany. Hevitra ho an'ny mascot vaovao KDE